पर्यटनमन्त्री योगेशको सचिवालयमा पूर्वमाओवादी, नेकपा बृत्तमा प्रसंसा::देश र जनताप्रति समर्पित
पर्यटनमन्त्री योगेशको सचिवालयमा पूर्वमाओवादी, नेकपा बृत्तमा प्रसंसा
युवा नेता तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले सचिवालय बनाउँदासमेत पार्टी एकतालाई पुष्ट्याईँ व्यवहारमा उतारेका छन् ।
सामान्यतः यसअघि प्रधानमन्त्री होस वा मन्त्री भएकाहरुले आआफ्ना पूर्वपार्टीका बाहेकलाई स्थान दिएका छैनन् । तर, मन्त्री भट्टराईले भने पूर्वमाओवादीलाई समेत समेटेका छन् । पूर्वएमालेबाट प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीको सचिवालयमा कोही पनि पूर्वमाओवादीका छैनन् । त्यस्तै पूर्वएमालेबाट मन्त्री भएकाहरुको सचिवालयमा कोही पनि पूर्वमाओवादीका छैनन् ।
मन्त्री भट्टराईले प्रमुख स्वकीय सचिवमा प्रेम गुरागाईँलाई राखेका छन् । उनी पूर्वएमालेका हुन् । त्यस्तै, पूर्वएमालेका सम्पर्क मञ्चका अध्यक्ष सन्तोष मादेन र पूर्वमाओवादीका सम्पर्क मञ्चका अध्यक्ष निङ्मा डण्डु लामा सचिवालयमा राखेका छन् ।
‘ओली-प्रचण्डका दिन गए, हामी नेतृत्व गर्छौं’ : योगेश भट्टराई
नेकपाका युवा नेताहरु भन्छन् ज्ञानेन्द्र शाहीलाइ हामी तह लगाउछाै, हेर्नुस् मन्त्री देखी कसले के भने ?
बादल र बिष्णुले काम गर्न दिएनन् , एकता भाड्ने खेल हो, सचिवालयको निर्णय मान्ने हुदैन : योगेश भट्टराई
प्रचण्ड दुबई उडे लगतै कसरी बने योगेश भट्टराई पर्यटन मन्त्री ? ४ बजे सपथ ग्रहण! को हुन् भट्टराई ?
मन्त्री भए पछी गगनले “योगेश भट्टराई दाई” भन्दै दिए यस्तो शुभकामना….
संसदमै किन रोए माधव नेपाल र मन्त्री योगेश भट्टराई ?
पर्यटन मन्त्रीयोगेश भट्टराई